ओली चढ्ने गाडी कर्मचारीले ओलीलाई नदिन चेतावनी | मरुभूमीको कोसेली nepalkuwait
ओली चढ्ने गाडी कर्मचारीले ओलीलाई नदिन चेतावनी
Posted on फ्रेवुअरी 28, 2010 by toyadahal	एमाले नेता केपी ओली चढ्ने गाडी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रहरीले छापामारशैलीमा लगेको छ　। एक सातादेखि कर्मचारीको कब्जामा रहेको गाडी लिन प्रहरी मंगलबार राति प्राधिकरण छिरेको थियो　।
नेपालको अहिलेसम्मको महँगो जलविद्युत् आयोजना मध्यमस्र्याङ्दीको नाममा रहेको बा५च ४७१८ नम्बरको निशान जिप एमाले नेता ओलीले चढ्दै आएका थिए　। घाटामा गएको प्राधिकरणमाथि शोषण गरेको आरोप लगाउँदै प्राधिकरणका कर्मचारीले ५ फागुनमा ओलीको गाडी नियन्त्रणमा लिएका थिए　। गाडी दुरुपयोगविरुद्ध सबै संगठनले प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई गत भदौमै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने माओवादी, एमाले र राप्रपासमर्थित कर्मचारी आन्दोलनमै छन्　। ओलीले भने पूर्वगृहमन्त्रीका रूपमा आफूलाई सरकारले गाडी दिएको दाबी गर्दै आएका छन्　। तर, कर्मचारीले भने पूर्वमन्त्रीलाई गाडी दिने हो भने सरकारले नै दिनुपर्ने बताउँदै प्राधिकरणको गाडी दुरुपयोग गर्न नदिने अडान लिएका छन्　।
गाडी मात्र होइन, तेल र मर्मतखर्च पनि ओलीले प्राधिकरणबाटै लिने गरेको आरोप लगाएका छन्　। कर्मचारीका अनुसार अघिल्लो बुधबार पनि ओलीको गाडी तेल र मर्मतखर्च लिन प्राधिकरण आएको दाबी गरेका छन्　। ओलीको गाडी प्राधिकरणपरिसरबाटै कर्मचारीले कब्जामा लिएका थिए　। गाडी फिर्ता लिन तत्कालै प्रहरी आए पनि कर्मचारी प्रतिरोधपछि खालिहात फर्किएको थियो　।
कर्मचारीले अब गाडी ओलीलाई नदिन चेतावनी दिँदै पत्रकारको रोहवरमा चाबी बिहीबार ओलीको गाडीको चाबी प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीलाई जिम्मा लगाएका थिए　। प्रहरीले गाडी लैजाने आशंकामा कर्मचारीले गाडीका सबै चक्का पन्चर बनाइदिएका थिए　।
विवाद चर्किएपछि मंगलबार अपराह्न प्राधिकरणमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले अब गाडी दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए　। उनले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले चढ्ने प्राधिकरणको गाडीको मूल्य दिन सरकारलाई पत्र लेखेको जानकारी पनि गराएका थिए　।
कार्यकारी निर्देशकको प्रतिबद्धतापछि ढुक्क कर्मचारी मंगलबार कार्यालय समय सकिएपछि घरघर गए, तर राति सात बजे प्राधिकरण छिरेको प्रहरीटोलीले ओलीको गाडी लिएर गयो　। प्राधिकरणका गेटमा गार्ड त थिए, तर उनले प्रहरीलाई रोक्न सकेनन्　। ‘माथिको आदेश भन्दै प्रहरी छिरे, हामीले रोक्न सक्ने कुरै भएन,’ गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मीले भने　।
प्राधिकरणका निर्देशक झा र उपकार्यकारी बिसीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट ठाडो आदेश आएपछि प्रहरीलाई गाडी लैजान दिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्　। ‘माथिबाट गाडी उपलब्ध गराउन ठूलो दबाब आयो, गाडी नदिएर म के गरौँ ?’ आक्रोशित कर्मचारीसँग बुधबार निर्देशक झाले भने　।
ओलीका लागि गाडी लगिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी कल्याण परिषद् दिनभर विरोधमा उत्रिएका थिए　। बुधबार बिहानैदेखि कर्मचारीले प्राधिकरणको मूलढोकामा ताला लगाएका थिए　। ओलीको गाडी बुधबार कार्यालय समयमै प्राधिकरणमा फिर्ता ल्याउन उनीहरूले झालाई चेतावनी पनि दिएका थिए　। तर, झाले आफू राजनीतिक दबाबले विवश भएको गुनासो गरिरहेका थिए　।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री भीम रावलले ऊर्जामन्त्री प्रकाशरण महतलाई ओलीले प्रयोग गरेको गाडी तुरुन्त फिर्ता गर्न दबाब दिएका थिए　। डा. महतले कार्यकारी निर्देशक झालाई गाडी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि चाबी प्रहरीले पाएको थियो　।
कर्मचारी संगठनहरूका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूबीच बुधबार साँझ भएको वार्तामा अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएका गाडीहरू तत्काल फिर्ता गर्ने र त्यो नभएमा गाडीको लागतबराबरको रकम सरकारबाट पाउने सहमति भएको छ　। त्यस्तै, ओली चढ्ने गाडीको पैसा असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्राधिकरणले बुधबार नै पत्र लेखिसकेको छ　।
उता व्यवस्थापनले अनाधिकृत रूपमा नेतालाई दिएका प्राधिकरणका गाडी फिर्ता नगरे कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्　। ‘ओलीले चढ्ने गाडी नियन्त्रणमा लिएर हामीले व्यवस्थापनलाई बुझाएका थियौँ,’ प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद ढकालले भने, ‘उच्चअधिकारीले नेताहरूलाई खुसी पार्न अनाधिकृत रूपमा गाडी दिएका छन्, तर हामी चुप बस्दैनौँ　।’
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कुमार ओझाले गाडी दुरुपयोग भइरहेको विषयमा व्यवस्थापनलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाई नभएकाले कर्मचारी आक्रोशित भएको बताए　। उनले बुधबारको सहमति कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई केही समय दिने र कार्यान्वयन नभए फेरि अान्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए　।
यता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्राधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई उपलब्ध गराएको प्राधिकरणको गाडी यथावत् नै राख्न पत्र पठाएको छ　। कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झाले सरकारको निर्देशनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र गृहमन्त्रीलाई गाडी उपलब्ध गराएको बताएका थिए　।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाँच वटा गाडी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री केपी ओलीलाई भने निर्णय नै नगरी अनधिकृत रूपमा गाडी उपलब्ध गराएको थियो　।
Filed under: समचार « सम्झनामा एउटा प्रेम मिस इन्डिया यूके २०१० »
Tej Rai, on फ्रेवुअरी 28, 2010 at 10:44 अपराह्न said:	“विश्वमा सब-भन्दा गफाडी एसियाली, एसियालीमा पनि नेपाली, नेपालीमा पनि झापाली, झापालीमा पनि ओली र मैनाली” भन्ने हस्यौली बनेको थियो एकताका । मैनाली त पाखा लागि हाले । तर एमाले नेता केपी ओलीको गफले भने बिंडो धानेकै छ । नेपाल विधुत प्राधिकरणको ओलीले चढिरहेको गाडीको मर्मत खर्च र पेट्रोल खर्च लिन जाँदा कर्मचारी युनियनले कब्जा गरेकै दिन एउटा कार्यक्रममा ओलीले गफ दिएका थिए, “माओवादी भनेका लुटेरै हुन, त्यही भएर मेरो गाडी प्राधिकरणमा लुटे । मलाई लाज लागेको छैन, किन भने गोरु नांगै हिड्दा मैले लाज मान्ने गरेको पनि छैन ।” कर्मचारीले हावा खुस्काएर राखेको गाडी, राता-रात प्रहरी पठाएर लुटेर लगेको गाडीमा सररर हिड्दा अहिले ओलीजीलाई लाज लागेको छ कि छैन होला ? हुन त, गोरु नांगै हिड्दा भुक्ने कुकुर पनि नांगै हिड्दा के को लाज ? यो कुरा त जनताले पनि बुझेकै छन नी । ओलीज्यू ! हामी मैन बत्तीले नै काम चलाऊदै गरौला, हजुरहरु मज्जाले पजेरो चढे हुन्छ, परेको हामी निर्धा-निमुखा जनताले बेहोरौंला ।